Ogeessaa suuraa: Mormii Oromoo suuraan galmeessee ol kaa’e – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOgeessaa suuraa: Mormii Oromoo suuraan galmeessee ol kaa’e
‘Yeroon maqaa kooti’
(bbc)–”Yeroon kuni yeroo kooti, haalli amma tahaa jiru kunis yerooma keenya keessa tahaa jira gatii taheef, dabaltaan maqaan koos Yeroo waan taheef” agarsiisa suuraa wiirtuu aartii Guraamaayilee jedhamutti dhiyyeese ”Yeroo keenya” jedheen moggaase jedha.
Yeroo Addunyaa Itichaan maqaasaati suuraa kaasuun immoo ogummaasaa. Mormiifi diddaa uummataa Oromiyaa keessa gaggeefamaa ture suuraan galmeessee ol kaa’aa jira.
”Ijoolleen yeroos gadi ba’anii kan mormaa turan jaalatanii mitii karaa biraa waan hin qabneefi, biyyattii keesstti immoo namani firri isaa jalaa hin hidhanme hin jiru”
Yeroosaatti kana galmeessuun baayyee sodaachisaa yoo taheyyuu seenaa keenyi garuu ol kaa’amuu qaba jedhee waanin amananuuf suuraawwan kunneen kaasaa ture. jedha Yeroon.
‘Yeroon suuraa kaasuu jalqabe Tulluu Geedoon deeme’
Qaabatoo ‘Tulluu Geedoo’
”Yeroon footoo kaasuu jalqabe biyya akkoo koo naannoo ‘Geedoo’ lafa ‘Tulluu Gedoo’ jedhamu dhaqeen ji’a afuuriif taa’ee.
Baadiyyaa ji’a afur taa’een jireenya achii akka daawwitii taheen agarsiisuu fedhe isa immoo waanuman beekurraa jalqabe.
Isan waaree kaasaa oolu waarii akkoo kootti agarsiisan ture. Akkoon koo yeroo suuraashee argitu ”akkas dulloomeeraa edaa”, ”dhaqni koo akkas ta’eeraa” naan jettee.
Dubbiin akkoo koo nama waggaa 76 taatee dulloomeeraa jettee na gaafachuun qabxii guddaa ka’umsa hojii koo tahe Jechuun Yeroon yaadannoosaa ibsata.
‘Mormii yeroosii namoonni hin amanne jiru ture.’
Akkuma akkoo koo, isa keessa jiru malee mormii adeemaa ture namni isa feesbuukii irratti ilaalu malee hin beeku.
Inumaayyuu ”Namoonni hin amanne jiru. Dhugaadha moo kuni namoonni jedhan jiru” kanaafin mormii sana galmeessuun namni waan biyyisaa keessa dabrite akka daawwitii of keessatti haa ilaaluuf jedheen ol kaa ‘aa ture jedheera Yeroon
Yeroon ”Namni hin amanne suura gaafa ilaalu ni amana kunimmoo anaaf waa guddaadha ” jedha. ”oduun ni baddii” suuraan waan qabatamaa gatii taheef waggaa digdama booda yoo argitellee ni amanta jedha.
Dorgommii suuraa jiruu loltootaa mul’ise
Agarsiisa suuraa Oromoo ‘isa jalqabaa’
Namoonni mormii sana miidiyaa hawaasummaa hogganaa turan kan akka Jawaar Mahammad faa seensa yoo naa barreesan, namni seenaa beekuus yoo irratti hirmaate, suuraa walitti qabe kana gara kitaabaatti geeddaruun hawwiisaa akka tahe Yeroon dubbateera.
Kanaanis dhalooti dhufuu irraa barata, qeerroonis tahe namoonni mormii irratti hirmaachaa turan gara dudduubaatii akka ilaalan gargaaras jedha.
Amma immoo mormitoota kanneen akka Jawaar Mahammad, Daawud Ibsaafi Alemtsehaay Wadaajoo biyya galanii yeroo simataman anis suuraa kaasuun isaan simadheera kana wiirtuu aartii Goethe institute Finfinneetti argamutti agarsiisaaf dhiyeesseera jedheera.
‘Jarmanitti namoonni yoo dulloman kan isaan gargaaru hin jiru.’
Barliinii hanga Finfinnee
Yeroon hojii isaa magaalaalee Jarman Barliin, Firaankfarti, Biraandanbuurg fi kan biroottillee hojiiwwan isaa do’ii akka dhiyeesse hima.
Finfinneetti wiirtuuwwan agarsiisa suuraa Goethe institute, Gurmaayileefi Layilaa jedhamanitti hojiiwwansaa agarsiisaaf dhiyeesseera.
”Dhimma na gammachiisuu tokko yeroo dheeraa hanga waggaa lamaa tahu fudhachuun nan galmeessaa bifa aartiitiin nan seenessa” kan jedhu Yeroon
Suurawwan uumamaa ‘National Geographic’
Halluuwwan gimbii Jagool fi haala jiruuf jireenya namoota achii Layilaa Gaalariitti daawwannaaf dhiyeesseera.
Kanamalees, ‘biyya Jarman an jiraadhu keessatti namoota raagan waliin wayitan hojjedhu haala jiruufi jireenyaa isaan dabarsan kan biyya keenyaan wal hin fakkaatu, yoo dulloomte namni nama hin gaafatu.” dhimma kanas leensii kaameeraa isaatiin hambifatee namootatti agarsiifateera.
Jireenya baadiyyaa maatiisaa ‘Tulluu Geedoo’ illee korojoo suuraasaa keessa kaawwachuu ni dubbata.
Istuudiyoo guddicha Barliin keessatti argamu fi jiruufi jireenya artistii beekamaa achi keesatti hojjtus suuraan dhiyeessuuf jira. jechuun hojiiwwasaa muraasa BBC tti himeera.
PM Dr Abiy To Meet With Leaders Of Opposition Parties